Copy Mụọ ahia 2 na eToro maka n'efu! Ntuziaka 2021 na Trading Copy
eToro Detuo Pọtụfoliyo Pụrụ Iche site na Mụta Azụmaahịa 2 - Soro dinglọ Ahịa -lọ Anyị! 2021
Njirimara Copydị Detuo dị na eToro abụghị ihe na-enweghị mgbanwe. Ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ onye ahia ịchọrọ n’ile anya, kpebie ego ole ịchọrọ itinye - ọ bụ ya - ị nwere ike ịnọdụ ala ma nwee ọ incomeụ na - abaghị uru.
If naanị ọ dị mfe.
Site na nke a, anyị na-ekwu na eToro bụ ebe obibi maka ndị ahịa 12 nde - emesịa mee ka o sie ike ikewapụ ọka wit na igbogbo ọka. Ozi ọma maka gị bụ na ndị otu anyị na-azụ ahịa n'ime ụlọ abanyela na eToro Copy Trading.
Guo ka ị chọpụta otu ị ga - esi gosipụta ụdị ndị ahịa anyị a kara aka na - erite na uru mgbe anyị ritere uru!
Rịba ama: formsdị ahịa niile na-ebute ihe egwu. Enweghị nkwa na ị ga-enweta uru site na isoro ndị ahịa anyị. Kama nke ahụ, enwere ohere ọ bụla ị ga-enweta mfu.
Mụta Pọtụfoliyo Azụmaahịa Azụmaahịa 2 na eToro
Ntụle ụlọ ọrụ
Detuo nzụta na ire ọnọdụ dịka-maka-dị na eToro
Na-arụ ọrụ azụmaahịa na-azụ ahịa n'ụzọ ego
Gharia ndi otu anyi n’ime ahia
Jikọọ na anyị Pọtụfoliyo ọrụ pọtụfoliyo ọrụ maka n'efu!
Detuo Muta 2 ahia na eToro
Gịnị bụ eToro Detuo Ahịa?
The Detuo ahia ahia bu ihe eji ewu ewu nke ndi na-ere ahia na ntaneti. Na nkenke, ọ na-enye gị ohere 'idetuo' onye ahịa nwere ahụmahụ na-eji usoro eToro. Na mbu, ị ga - e copyomi pọtụfoliyo ha dị ka ihe-dika.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ahịa ahụ nwere 40% nke pọtụfoliyo ha na ebuka Apple, dịka ị ga-enwe. Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ nwere 20% na gold na 15% n’ime eke gas, dị ka ị ga-eme. Ọzọkwa - na ikekwe kachasị mkpa, ị nwekwara ike ịhọrọ idetuo onye na-ere ahịa na ihe na-aga n'ihu ndabere.
Nke ahụ bụ ikwu, ọ bụrụ na onye ahịa ahụ ahapụ ọnọdụ, dịka ị ga-eme. Ọ bụrụ na otu onye ahịa wee tinye a ọhụrụ akpan owo ka ha pọtụfoliyo - ọzọ, dị ka ị ga-. Na tiori, nke a pụtara na ị nwere ike na-arụsi ọrụ ike ịzụ ahịa n'ịntanetị na-enweghị mkpa ibuli mkpịsị aka.
Kama nke ahụ, onye na-ere ahịa oyiri gị họọrọ ga-ekpebi akụ ị ga-azụ, na mgbe. Ha ga - ekpebi ego ole pọtụfoliyo ha ga-ekenye onye ọ bụla bara uru, yana - mgbe ha ga-eresị ha. Nke kachasị, eToro na - enye gị ohere iji atụmatụ a were obere ego naanị $ 200 - ọ nweghị ụgwọ ọzọ ga - adị.
Kedu otu eToro Detuo ahia ahia
Usoro Nchịkwa Detuo n'onwe ya dịtụ n'ihu. Akụkụ kachasị sie ike bụ ịmara otu esi ahọrọ onye na-azụ ahịa nke ga - eme gị uru na - agbanwe agbanwe. A sị ka e kwuwe, arụmọrụ gara aga abụghị ihe ọkụ ọkụ na-egosi nsonaazụ n'ọdịnihu.
Ka o sina dị, usoro ntinye ego na njedebe na-arụ ọrụ dịka n'okpuru:
1kwụ na XNUMXkwụ XNUMX: Họrọ Detuo Ahịa
Ebe mbido ọdụ ụgbọ mmiri gị ga - ahọrọ onye na - azụ ahịa ị toomi. Agbanyeghị na ikpo okwu eToro bụ ebe obibi karịrị nde mmadụ iri na abụọ, ọ bụghị ndị ọrụ niile debanyere aha na mmemme Copy Copy. Site na nke ahụ, a ka nwere ọtụtụ puku ndị ahịa ịhọrọ, nke pụtara na ị ga-arụ ụfọdụ ọrụ ụlọ.
Offọdụ n'ime usoro metro eToro na-enye gị ohere ịlele banyere onye ahịa bụ:
Ọrụ akụkọ ihe mere eme: Mgbe ị pịrị na profaịlụ nke eToro Detuo Onye ahia, ị nwere ike ilele ọnọdụ ọ bụla nke onye na-etinye ego etinyela. Dị ka ndị dị otú a, ị nwere nkọwa doro anya nke otu onye na-azụ ahịa siworo rụọ kemgbe ha sonyere n'elu ikpo okwu. Enwere ike ilele nke a na ọnwa ọnwa - nke bara uru n'ezie.
Akụ Achọrọ: I nwekwara ike ile klaasị akụ klas nke onye ahịa ahụ nwere mmasị ịkọ nkọ. Dịka ọmụmaatụ, ebe ụfọdụ ndị ahịa na-arapara na ebuka, ndị ọzọ na-elekwasị anya na Forex. Fọdụ ndị na-azụ ahịa bụ karịa Jack of All Trades - na-ekpuchi ọtụtụ klas akụ.
Egwu Rating: Ihe na-akpata teknụzụ na-enye ike eToro nwere ike iru ọkwa dị egwu na onye ahịa ọ bụla. Nke a sitere na 1 ịbụ ihe egwu kachasị dị ala, ruo 10. Nke a na-enye gị ohere ịrapara na ndị na-azụ ahịa na-egosipụta ọfụma ị nwere ike ịnwe.
Oge ahia: eToro na-emekwa ka ị mara ọnụọgụ ụbọchị (ma ọ bụ oge awa) nke onye ahịa ahụ na-emeghere ọnọdụ. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ọ gaghị ada dịka metric dị mkpa - ọ bụ n'ezie. Ka emechara, mgbe ụfọdụ ahịa na-a ụbọchị trading or na-azụ ahịa na-abịaru nso, ndị ọzọ nwere mmasị na atụmatụ ogologo oge.
Akụ ndị dị n'okpuru njikwa: I nwekwara ike ile ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ eToro ndị na-edegharị onye ahịa ahụ ajụjụ a na-ekwu ugbu a. Ọzọkwa, nke a na-emekwa ka ị mara ego ole onye ahịa ahụ nwere n'okpuru njikwa. Mee elu mee ala, ndị ahịa ahịa kacha mma na eToro nwere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ site n'elu, enwere ọtụtụ ọnụọgụ nke ịkwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa oyiri na eToro.
Kwụpụ 2: Kenye ego
Ozugbo ịhọrọla onye na-ere ahịa eToro nke masịrị gị, a ga-agwa gị ka ekenye ụfọdụ akaụntụ gị. Dịka e kwuru na mbụ, nke a kwesịrị ịbụ opekata mpe $ 200.
Ọzọkwa, ikwesiri ikpebi ma ịchọrọ idetuo onye na-ere ahia na ihe na-aga n'ihu ndabere, ma ọ bụ naanị detuo pọtụfoliyo ha ugbu a nwee.
N'anya anyị, ọ dịghị ebe ị ga-achọ nke abụọ. A sị ka e kwuwe, ị gaghị erite uru site na ịzụta na ire ahịa na-aga n'ihu nke onye na-ere ahịa na-eme - nke pụtara na ị nwere ike ịhapụ ohere ị nweta uru.
Ozugbo ị kwadoro itinye ego ahụ, eToro ga-ewepu ọnụọgụ ego gị na njikwa ego gị. Ọ bụrụ na ị ka na-enwe mgbagwoju anya banyere otu 'iyingomi' akụkụ nke usoro ahụ si arụ ọrụ, ka anyị lelee ihe atụ ọsọ ọsọ.
Ka anyi were ya na onye ahia gi nke gi hotara nwere ihe ruru £ 100,000 na uru ha
£ 25,000 dị na ebuka IBM (25%) na £ 75,000 na nkekọ ETF (75%)
I kpebiri itinye ego £ 1,000
Nke a pụtara na £ 250 (25%) nke pọtụfoliyo gị ga-enwe ebuka IBM yana £ 750 (75%) na ETF nkekọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ baghị uru ego ole ị nwere n'aka gị - pọtụfoliyo Ntanetị gị ga-adị nha dịka nke onye ahịa.
Nzọụkwụ 3: ịkpata ego
Abia n’inweta ego, ihe eToro Detuo ahia na aru oru dikwa iche na usoro itinye ego itinye aka na ya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, pọtụfoliyo gị bụ mkpụrụedemede nke onye ahịa gị ahọpụtara. Ka o siri dị, uru ọ bụla onye ahịa ahụ na - enweta - na usoro pacenti, ga - egosipụta gị Pọtụfoliyo.
Ka anyị were ya na itinye ego $ 2,000 ka ọ bụrụ onye na-azụ ahịa nke na-elekwasị anya na Forex
Onye ahia ahụ na-ekenye 1% nke pọtụfoliyo ha na usoro ịzụta GBP / USD - na ntinye nke 30x
N'aka nke ya, nke a pụtara na ị na-etinye $ 20 n'ihe egwu ahụ, n'agbanyeghị, yana itinye ntinye 30x
Onye ahia ahụ na-emechi ọnọdụ GBP / USD ha - na-enweta uru nke 0.5%
Pọtụfoliyo gị gosipụtara ahịa - nke pụtara na ị mere 0.5% nke $ 20 - nke naanị $ 0.10 ($ 20 osisi x 0.5%)
Agbanyeghị, ịnwekwara ikike nke 1:30 tinye n'ọrụ - nke pụtara na ị rụpụtara $ 3 n'ezie
Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ndị a dị n'elu na-anọchite obere nlọghachi, ọ dị mkpa icheta na ndị na-ere ahịa ụbọchị mbụ ga-etinye ọtụtụ ọnọdụ ụbọchị niile. Ka o siri dị, obere nlọghachi nwere ike ịgbakwunye ngwa ngwa.
Yabụ ugbu a ịmarala otu Detuo Trading si arụ ọrụ, ugbu a, anyị kwesịrị ịtụle ihe Mụta 2 Trade nwere ike ịnye. Nke mbu, ndi otu ahia anyi no n’ime ulo na aru oru ego na nnweta ahia ahia maka ihe karịrị afọ 15.
A maara anyị nke ọma na oghere ọrụ mgbaàmà - yana ndị otu 1,000 + ndị ọzọ na-erite uru na ntụle ahịa anyị kwa ụbọchị. N'ezie, ndị otu anyị lekwasịrị anya karịa 76% - ọ bụ ya mere anyị ji enwe mmụba na ntinye aka na akaụntụ.
Ka o sina dị, Mụta 2 Trade na nso nso a sonyere eToro Copy Trading program maka otu isi ihe kpatara - iji mee ka ndị otu anyị rite uru site na ego na-abaghị uru. A sị ka e kwuwe, ọ bara uru dị ka ihu igwe, ngwa ahịa, na akara ngosi cryptocurrency - a ka chọrọ ime ihe ọ bụla.
Ọzọkwa - na ikekwe kachasị mkpa, a na-eme ihe ngosi mgbe ọ bụla a nabatara ha. Emechakwa, ahịa azụmaahịa nwere ike ịkwaga na oke ọsọ ọsọ. N'aka nke ya, nke a pụtara na ụfọdụ ndị otu anyị anaghị atụfu ohere inweta uru.
Que - the Mụta 2 Trade Detuo Trading Pọtụfoliyo!
Na nkenke, ugbu a ị nwere ohere iji gosipụta nzụta na ire ọrịre nke ndị ahịa anyị n'ime ụlọ na-enweghị ibuli mkpịsị aka. Ọ bụrụ na ndị ahịa anyị zụta EUR / USD - dịka ị ga-azụ. Ọ bụrụ na ndị ahịa anyị na-ere AUD / NZD - ọzọ, dịkwa ka ị ga-ere.
N'ihe banyere atụmatụ ahia anyị, nke a na-arụ ọrụ otu ihe ahụ dị ka atụmatụ mgbaàmà anyị. Maka ndị na-amaghị, nke a pụtara na anyị ga-ewere ihe egwu / ụgwọ ọrụ nke 1: 3.
N’okwu ndị dị mfe, nke a pụtara na site n’ihe ize ndụ 1% nke isi obodo anyị, anyị ga-enweta uru nke 3%. N'ezie, a na-enweta nke a site na ịbanye iwu nkwụsị na inweta-uru na ahịa anyị niile. Ọzọkwa, site na iyingomi anyị na eToro - ịkwesighi ichegbu onwe gị gbasara iwu onye ọ bụla - ebe ihe niile na-akpaghị aka.
Etu esi Detuo Mụọ 2 ahia maka n'efu
Dị ka ụda nke ị copomi otu ndị ahịa anyị n'ime ụlọ site na ikpo okwu eToro? Ọ bụrụ otu a, soro usoro ndị a iji bido ugbu a!
1. Mepee Akaụntụ Anyị na Njikọ Anyị Pụrụ Iche
Iji mee ka bọl ahụ na-agagharị, ịkwesịrị imeghe akaụntụ na eToro site na njikọ anyị pụrụ iche.
Nwere ike ịga ogologo gaa na peeji nke na ịpị njikọ ebe a.
Ozugbo ị rutere na ebe nrụọrụ weebụ eToro, malite usoro ndebanye aha. Nke a ga - achọ ụfọdụ ozi nkeonwe na kọntaktị - dịka:
Nọmba Taxtụ Isi Mba
Nọmba ekwentị Ekwentị
Ikwesiri imeputa aha njirimara na okwuntughe siri ike.
Mara: Ọ bụrụ n’inweela akaụntụ na eToro ma chọọ iji ọrụ nnwere onwe nnomi anyị na-akwụghị ụgwọ, zitere anyị ozi ọsọ ọsọ ma anyị ga-eme ka ịtọlite!
2. Ego Ego
A ga-agwa gị ugbu a itinye ego na akaụntụ eToro ọhụrụ gị. Ọnụ ego kacha nta na onye na-ere ahia a bụ $ 200 - nke bụ otu opekata mpe maka itinye ego na pọtụfoliyo Akaụntụ Anyị.
Nhọrọ ịkwụ ụgwọ akwadoro na eToro gụnyere:
Ndụmọdụ kachasị elu: Zere ịhọrọ waya banki ka ị ga-eche ụbọchị ole na ole ka ego wee rute. A na - akwụ ụgwọ nhọrọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ niile n'otu ntabi!
3. Zitere anyị nseta ihuenyo iji nweta aha njirimara eToro anyị
Ozugbo ị debanyere aha na akaụntụ ejiri ego kwenye, ị ga-achọ iwepụta nseta ihuenyo nke na-egosi gị:
aha njirimara eToro
Na i zute $ 200 nkwụnye ego kacha nta
Rịba ama, ị gaghị ekpughe ozi ọ bụla dị nro site na iziga anyị nke dị n'elu. Kama nke ahụ, aha njirimara niile na eToro bụ nke ọha. Otú ọ dị, anyị ga-ahụ na anaghị ekenye aha njirimara gị na onye ọ bụla wee si otú a - echedoro nzuzo gị 100%.
Ozugbo anyị natara nseta ihuenyo achọrọ, anyị ga-ezitere gị ozi na-akọwa aha njirimara eToro pụrụ iche.
4. Amalite I Coomi Muta 2 ahia
Ozugbo ị natara aha njirimara eToro anyị, ị ga-achọ ya. Wee, pịa bọtịnụ 'Detuo'.
Mgbe ahụ ị ga - ahụ igbe ka mmapụta ga - apụta. Ebe a, ịkwesịrị:
Tinye ego ịchọrọ itinye ego na pọtụfoliyo anyị na - ere ahịa (opekata mpe $ 200)
Tinye akà rà igbe iji detuo ọrụ aka niile anyị na - aga n’ihu
Ozugbo ị kwadoro ihe dị n'elu, ị ga-edegharị pọtụfoliyo anyị ozugbo! Mgbe ahụ, ịzụta ma ọ bụ ree ọnọdụ ọ bụla anyị mere ga-egosipụta na pọtụfoli nke gị.
Mara: Inwere ike itinye ego na ego gi n’oge obula n’edeputa anyi na eToro. N'ezie, ozugbo i mechiri ọnọdụ ahụ, a ga-etinye ego ahụ na akaụntụ eToro gị ma nwee maka iwepu ego.
Kedu akụ ga-amụta 2 Trade lekwasịrị anya?
Uzo ahia nile di na enyo eToro nke oru anyi. Nke a pụtara na ị ga-enweta uru agbakwunyere iji uru nke Forex anyị, ngwaahịa, cryptocurrency, na atụmatụ ahịa azụmaahịa- mana na-enweghị atụ. Ọ bụrụ na ohere dapụta, ndị ahịa anyị nwere ike ikpebi ị nweta klas ndị ọzọ - dị ka ebuka.
Ego ole ka ị na-akwụ maka ọrụ ịzụ ahịa Detuo gị?
Anyị anaghị akwụ ụgwọ ọ bụla ma ọlị maka ọrụ ịzụ ahịa Detuo anyị. Naanị ihe ị ga - eme bụ imepe akaụntụ na eToro site na njikọ anyị pụrụ iche wee zigara anyị nseta ihuenyo na-egosi aha njirimara gị na nkwụnye ego gị!
Ego m enwere nchebe na eToro?
Kpamkpam. eToro bụ onye na-achịkwa azụmaahịa siri ike nke na-arụ ọrụ kemgbe afọ 13. O nwere ikikere na FCA (UK), ASIC (Australia), na CySEC (Cyprus / Europe)
Ogologo oge ole ka ị bụrụla akụkụ nke mmemme eToro Detuo ahia?
Anyị sonyere na eToro Copy Trading program n'oge na-adịbeghị anya dị ka Septemba 2021. N'ime izu ole na ole mbụ anyị zụrụ ahịa, anyị laghachiri 5.91%.
Kedụ ka m ga esi enweta ego eToro Detuo Akaụntụ Akaụntụ m?
eToro na-anabata ọtụtụ ụzọ nkwụnye ụgwọ. Nke a gụnyere kaadị debit, kaadị kredit, e-obere akpa, na waya. Nkwụnye ego kacha nta bụ $ 200.
Ọ bụrụ na m nwere akaụntụ eToro?
Ọ bụrụ na inweela akaụntụ eToro, ị ka tozuru maka ọrụ azụmaahịa nnomi efu anyị. Dobe anyi ozi ma anyi g’eme ka imata otu esi a copyomi anyi!
Kedu ihe egwu ị na-ewe mgbe ị na-ere ahịa na eToro?
Ndị otu anyị na-azụ ahịa n'ime ụlọ na-agbaso otu ihe egwu / ụgwọ ọrụ dịka ọrụ mgbaàmà anyị. Nke a pụtara 1: 3, nke pụtara na anyị nwere ihe ize ndụ 1% iji nweta uru nke 3%.